GAZAR (Myanmar) - Codashop
GAZAR Diamonds ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းTop upလိုက်ပါ! သင်၏ GAZAR user ID ဖြည့်ပါ၊ သင်ဝယ်လိုသော Diamonds ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်ပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ GAZAR အကေငာင့်တွင်း ဝယ်ယူထားသည့် Diamonds ချက်ချင်း ဝင်ရောက်လာမည် ဖြစ်သည်။
မိမိ စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေချေစနစ် MPT, Telenor, Ooredoo, easyPoints, WavePay, Card Paymentတွေနဲ့ ပေးချေလိုက်ပါ။ Credit ကတ် ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် Login ဝင်ရခြင်း စသဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်မလိုပါ!
1 ID ထည့်သွင်းပါ
သင့်ရဲ့ Profile icon ကိုတစ်ချက်ကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ Profile စာမျက်နှာသို့သွားပါ။
သင်အသုံးပြုတဲ့ ID ကိုအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ အသုံးပြုသူအမည်နဲ့ ပူးတွဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သင့်IDကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ကူးယူနိုင်ပါတယ်။
36 Diamonds (recommended)
GAZAR Diamonds ကို Codashopမှာ Top Upလိုက်ပါ
GAZAR အတွက် Diamonds ကို ဝယ်ယူဖုိ့ စက္ကန့်ပိုင်းသာ လိုအပ်ပါသည်။ Codashopကို အသံုးပြုပြီး လျင်မြန် လွယ်ကူဆံုးနဲ့ ယံုကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ နဲ့ Myanmar မှ မီလီယာန် နဲ့ ချီတဲ့ Gamers များနဲ့ App Users များရဲ့ ယံုကြည်စိတ်ချ အာမခံချက်တွေအပွည့်နဲ့ Creditကတ် မှတ်ပံုတင်ခြင်း စသဖြင့် ဆောင်ရွက်နေစရာ မလိုတဲ့ အားလံုးအတွက်Codashop. စတင်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
Gazar ဟာ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ Streaming လုပ်သူတွေအတွက် ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ အလွန်အသုံး ဝင်တဲ့ Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Gazar ဟာနာမည်ကြီးမြန်မာ Streamers တွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းထားပါသေးတယ်။
Gazar ဟာပထမဆုံး မြန်မာ streaming application တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ဒါကိုထုတ်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာ Streamers တွေအတွက်အသုံးဝင်စေမယ့်အရာတွေကို အရောက် ပို့ဆောင်ပေးချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ ဂိမ်းကစားရင်းstream တဲ့အခါမှာလည်း Pro streamers တစ်ယောက်လိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို Gazar ကိုအသုံးပြုရင်းရရှိနိုင်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Profile ကိုတည်ဆောက်ပြီးတစ်ခြားဂိမ်းကစားတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ပြီး Gazar ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Gazar မှာ MLBB, PUBG, Minecraft, Call of Duty Mobile, Critical Strike CS, Pokemon Go နဲ့တစ်ခြားဖုန်းဂိမ်းတော်တော်များများကိုအထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ်။
အထူးဖော်ပြချက်အနေနဲ့ Gazar ရဲ့ Professional Streamers တွေကတော့ AKgolive, Aye Chan Myint Myat, Ko Pyae, Original Matt, Ace Gaming,as11, ashlynn , nx live, Reborn, Nakamura Gaming တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အထူးသီးသန့် Content တွေကို Gazar မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဓိကရည်ရွယ်ထားာကတော့ သင့်အနေနဲ့ နာမည်ကြီး ဂိမ်းတွေရဲ့ Content တွေနဲ့တစ်ခြားသိကောင်းစရာတွေကိုဒီနေရာမှာရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။